विवादपछि ‘रानी महल’ को छायांकन स्थगित, २० प्रतिशत छायांकनमै २ करोड सकियो ! – newslinesnepal
विवादपछि ‘रानी महल’ को छायांकन स्थगित, २० प्रतिशत छायांकनमै २ करोड सकियो !
प्रकाशित मिति : १९ असार २०७५, मंगलवार ०८:३३
पूर्व मिस नेपाल निकिता चण्डकको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘रानी महल’ को छायांकन विवादपछि रोकिएको छ । निर्माता वेदप्रसाद भुसाल र प्रोडक्सन डिजाइनर गणेश सापकोटाविचको आर्थिक विवादले छायांकन नै स्थगित भएको हो ।
चलचित्रको कलाकार चयनदेखि अन्य सबै कुरालाई गणेशले हेर्दै आएका थिए । निर्माता भुसालले २० प्रतिशत छायांकन मात्र सकिदा आफ्नो २ करोड खर्च भएको दाबी गरेका छन् । पाल्पाको रानी महलमा चलचित्रको छायांकन सकिएपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो ।
निर्देशक हिमाल न्यौपाने आफ्नो साथी भएकाले चलचित्रमा लगानी गरेको बताउने नयाँ निर्माता भुसालले गणेश सापकोटामाथि बढी विश्वास गर्दा धोका पाएको गुनासो गरेका छन् । उनले ५० लाखको हिसाबमा ७ लाखसम्म वेरुजु देखिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
प्राविधिकहरुका लागि आफूले पैसा दिए पनि त्यो पैसा सापकोटाले प्राविधिकहरुलाई नदिएको उनको भनाई छ । चलचित्रका निर्देशक हिमाल न्यौपाने पनि निर्माताको पक्षमा देखिएका छन् । उनले, सम्पूर्ण हिसाबको जानकारी बारम्बार लिनुपर्ने रहेछ भन्दै आफूले पाठ सिकेको बताएका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत छायांकन इनडोर गर्ने भएकाले एक महिनामा सक्ने उनको भनाई छ ।